Xarunta Ugu Weyn Amisom oo Lagu Soo Rogay Bandow 5 Maalmood Ah. – Shabakadda Amiirnuur
November 9, 2017 5:06 pm by admin Views: 300
War qoraal ah oo maanta kasoo baxay midowga Afrika ayaa lagu sheegay in xerada Xalane ay xirnaan doonto mudd shan maalmood ah iyadoo dhaqdhaqaaqa loo diiday saraakiisha Qaramada midoobay iyo kuwa Amisom.
Bandowgan ayaa ka billaabanaya maanta oo ah Khamiis-9- Novmber, wuxuuna ku egyahay 13; November 9, 2017. Sida lagu xusay Warka ka soo baxay Amisom, waxaa baaritaan dhanka nabad galyada ah lagu sameyn doonaa xerada gudaheeda kadib markii ay soo baxday cabsi weyn oo laga qabo Al-Shabaab.
Dhammaan shaqooyinka dhismaha, shirkadaha ganacsiga ee ku jira ama ka dhex shaqeeya xerada ayaa la joojinayaa, sidaas oo kalana shaqaalaha kala duwan ee ka dhex shaqeeya xerada ayaa waxa lagu sameynayaa dib eegis iyo hubinta shaqadooda, aqoonsiga iyo hab dhaqankooda, waxaa iyana la hakinayaa dhaqdhaqaaqa gaadiidka waaweyn iyo gawaarida inta uu socdo baaritaanku, iyada oo laguu deynayo xerada dhexdeeda Eeyo baarayaal ah ayaa lagu sheegay qoraalka.
Shirkadaha calooshood u shaqeystayaasha ah ee amniga qaabilsan ayaa iyagana la faray in ay keenaan liiska iyo tirakoobka rasaasta ay haystaan iyaga oo soo raacinaya ruqsadda ama ogolaanshaha haysashada hubka.
Arrimaha ayaa waxay ku yimaadeen tuhun iyo baqdin waxaana ku dhawaad 700; oo shaqaalaha aan joogtada ahayn ee Garoonka Aadan Cadde iyo Xerada Xalane loo sheegay in la hakiyay shaqada. Sida qoraalka ku xusan 15 ka mid ah shaqaalaha ayaa la sheegay iney weerar ka geysan doonaan gudaha Garoonka, sidoo kalana laga cabsi qabo in Al-Shabaab xerada Xalane ku weeraraan qalab iyo gaadiid ay horey uga qabsadeen Amisom.
Dhawaan ayay ahayd markii uu Mareykanka muwaadiniintiisa ugu baaqay iney si degdeg ah uga baxaan Soomaaliya gaar ahaan xarumaha ay degaan ee Xalane iyo garoonka diyaaradaha, waxaana shalay iyo maanta si xawlo ah u dhoofayay muwaadiniinta cadaanka ah ee Mareykanka iyo kuwa aan dhaladka ahayn balse heysta baasaboorkooda.